Rikoooo.com - Posky Boeing 777-200 fotsy, tsy misy atiny, tsy misy na inona na inona
Joined: 28 Nov 2016, 20:37
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by jangor » 08 Jan 2018, 20:45
Hi, efa nalefako ny Posky B777-200 avy amin'ny Rikooo ary nakariko miaraka miaraka amin'ny fitaovana famerenana mahazatra. Nopetahako izy roa ary manana fiaramanidina efatra nipetraka tao amin'ny ordinateranao aho. Na izany aza, rehefa manokatra azy ireo aho, fotsy, tsy misy famakiana, tsy misy tsipika, tsy misy details, tsy misy cockpit, na inona na inona. Akorandriaka fotsy fotsiny.
Nandefasako sy nametraka B777 maromaro hafa avy amin'ny Rikooo sy ireo tranonkala hafa maimaim-poana, saingy mitovy foana izany. Azoko lazaina fa izaho FSX dia hexed against B777. Toy izany koa, raha ny marina dia nitranga tamin'i De Haviland Dash 8-400. Mandefa pikantsarin'ny fiaramanidina fotsy ihany koa aho.
Ahoana no hamaharako an'io satria mitroka ny saiko?
Joined: 26 Jan 2018, 19:56
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Parky-Joe » 27 Jan 2018, 18:20
Midira ao amin'ny sehatr'asa ary ampanjifao ary alao ny bokotra 'preview DirectX 10' ary tokony ho eo daholo ny atiny. Izaho dia nanana an'io olana io ihany ary namantatra ny fomba hamahana azy io mandritra ny herinandro maromaro sy fitsarana. Manantena aho fa mety aminao io. [Karazana sari-tany = zoom HYBRID = 2] [/ sari-tany]